Mutengi Kutanga / Vanhu-vanotungamira / Kuvimbika / Nakidzwa neBasa / Tevera Shanduko, Inoenderera
Kugadziridza / Kukoshesa Kugovana / Kwekutanga, nekukurumidza, Zvimwe Nyanzvi
1. Mutengi Kutanga
Neshungu huru, tichaita zvatinogona kubatsira vatengi vedu kubudirira uye kuona kuti vatengi vedu vanogara vari ivo vekutanga vanobatsirwa. Zvinoreva hupenyu hwedu ndezve kupa rubatsiro kune vamwe, kune vatengi, uye kunzanga.
2. Vanhu vanotarisana
Zvichienderana nezvinodiwa nevashandisi, isu tinogara tichigadzirisa zvigadzirwa zvedu nemasevhisi.
Kutendeseka manejimendi, kutsvaga chokwadi kubva kuzvokwadi, rega vatengi vave nechokwadi. Isu tinoita zvakatendeseka, zvine hunhu, zvine mutsigo, zvakaenzana mune edu ese emukati nekunze mabhizimusi ekutengeserana kuti tiwane nekuchengetedza kuvimba kwevatengi vedu vatinoda. Isu tinochengetedza zvakavanzika zvevatengi vedu, vanhu uye vanobatika.
4. Nakidzwa neBasa
Basa chikamu chehupenyu. Vashandi veAirwoods vanonakidzwa nebasa uye vanonakidzwa nehupenyu, vachigadzira yakanaka, yakavhurika, inochinja uye ine simba nzvimbo yebasa.
5. Tevera Shanduko, Inoenderera Yekuvandudza
Kufunga hakugone kuomarara, uye shanduko inogadzira mikana. Isu tinogara tichitsvaga mhinduro iri nani uye tichiita basa redu zvirinani. Isu tinochengeta R & D kutsvagisa uye nekuvandudza matekinoroji uye sevhisi yekuchengetedza mitengo iri kudzorwa nokudaro tichiita zvakawanda nezvishoma zviwanikwa.
6. Kukoshesa Kugovana
Kurudzira kukosha kwekuziva, kugutsikana kwezvinhu inongova ye-yechigadzirwa chekukosha kuziva. Kurudzira kugovana mufaro wekubudirira uye kushungurudzika kwekutadza kuwana zvakajairika kukura.
7. Pakutanga, Kurumidza, Nyanzvi
Ita zvekutanga uye uwane mimwe mikana;
Tora matanho nekukurumidza uye tora mimwe mikana;
Iva nyanzvi uye uwane kubudirira kwakawanda.
Basa redu ndere kuva mupi wemhinduro weKuvaka Mhepo Hwakanaka Zvivakwa.